किन आउँछ अमिलो पानी ? | Makalukhabar.com
किन आउँछ अमिलो पानी ?
एजेन्सी । मानिसलाई खाना खाएपछि मुखमा अमिलो पानी आउने, छाती तथा घाँटी पोल्ने हुनसक्छ, जसलाई ‘हार्ट बर्न’ भनिन्छ । ‘हार्ट बर्न’ भन्ने चलन भए पनि मुटु पोलेको भने होइन । यी लक्षणलाई मेडिकल शब्दावलीमा जीईआरडी (ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज) भनिन्छ । अन्ननली र आमाशयको बीचमा एउटा भल्भ हुन्छ । अन्ननलीबाट खाना जाने बेलामा केही खुकुलो हुने यो मासंपेशी अरू बेला साँघुरिएर बस्छ । यसको विशेषता भनेकै खाना एकतर्फी रूपमा पास गर्ने हो । तर, कतिपयको अन्ननली र आमाशयको बीचमा हुने भाग सामान्य अवस्थाभन्दा बढी खुकुलो भएकाले यस्तो समस्या हुन्छ । हर्निया भएका मानिसहरूको पनि आमाशयको माथिल्लो भल्भ खुकुलो भएर अमिलो पानी आउने समस्या हुनसक्छ ।
कुनै विशेष कारणले आमाशयको भल्भ केही समयका लागि खुकुलो भएर पनि अमिलो पानी या डकार आउने समस्या रहनसक्छ । गर्भवती अवस्था अर्को उदाहरण हो । उनीहरूको पेटको आकार बढेर आमाशयमा दबाब पर्छ । त्यसले गर्दा भल्भ खुकुलो भएर अमिलो पानी आउने लक्षण बढ्छ । अर्को कारण गर्भवती अवस्थामा हुने हर्मोनको गडबड हो । त्यसले पनि अमिलो पानी आउने, वाकवाकी लाग्ने बनाइदिन्छ । कसैलाई पहिलो तीन महिनामा यस्तो हुन्छ भने कसैको अवधि नौ महिनासम्म पनि जानसक्छ । यस्तो लक्षणले आत्तिनुपर्ने कुनै कारण त छैन । तर, कतिपय महिलालाई भने कुनै खानेकुरा नखाने, पानी पनि नरहने भएकाले जलविनियोजन (डिहाइड्रेसन) भएर अस्पताल भर्ना गर्नेसम्म पनि हुनसक्छ ।
तर, अधिकांशको पहिलो तीनचार महिनापछि कम हुँदै जान्छ । त्यस क्रममै कतिपयलाई यति धेरै अमिलो पानी आइदिन्छ कि कुनै औषधिले पनि छुँदैन । अन्य कतिपय कारणले पनि अन्ननली र आमाशयको जंक्सनमा असर परेर अमिलो पानी आउँछ । मानिसको आमाशयमा अम्ल हुन्छ । त्यो अम्ल फर्केर अन्ननलीमा वा मुखमै पनि आउन सक्छ, जसलाई हामीले अमिलो महसुस गर्छौं । आमाशयमा अम्ल बस्न नै अनुकूल संरचना हुने भएकाले त्यहाँ अम्ल रहँदा हामी असजिलो महसुस गर्दैनौँ । तर, अन्ननली, मुख आदि अंगको त्यस्तो अम्लसँग सम्पर्क नहुने भएकाले त्यससँग लड्ने संरचना हुदैन र अम्ल ती अंगमा पर्नासाथ हामी पोलेको महसुस गर्छौं ।
हामीले खाएको खाना अन्ननली, आमाशय, सानो ठूलो आन्द्रा हुदै निष्कासन हुने निश्चित अवधि हुन्छ । हरेक अंगमा खाना केही समय भण्डारण हुन्छ । खानाको स्वरूप र प्रकृति हेरेर एउटा अंगबाट अर्कोमा जाने अवधि फरक पर्छ । झोल र पानी छिटो जान्छ भने ठोस पदार्थले केही समय लिन्छ । बोसो र चिल्लोयुक्त खाना खाँदा आमाशयदेखि सानो आन्द्रामा जाने अवधि लम्बिन्छ । लामो अवधि आमाशयमा रहने भएकाले बोसो र चिल्लोयुक्त खानाले अन्ननली र आमाशयको जंक्सनलाई केही खुकुलो बनाइदिन्छ । फलस्वरूप हामीले अमिलो पानी आएको महसुस गर्छाैं । गुलियो वा फलफूल खाँदा छिटो भोक लाग्छ । तर, बोसो र चिल्लोयुक्त खाना खाए पनि अन्यको तुलनामा हामीलाई भोक पनि अलि ढिलो नै लाग्छ । आमाशयबाट सानो आन्द्रामा खाना जान समय लाग्ने र पच्ने अवधि पनि लम्बिने भएकाले भोक ढिलो लाग्ने गरेको हो ।
काठमाडौँ महानगरको ढल थुनियो, दुर्गन्धले महामारी फैलिने त्रास
मोरङ, २८ कात्तिक । विश्व मधुमेह दिवसको अवसर पारेर बिहीबार बिराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालले दुई स्थानमा निःशुल्क मधुमेह परीक्षण एवं परामर्श शिविर गरेको छ । मोरङको बेलवारी र नोबेल अस्पताल परिसरमा निःशुल्क मधुमेह परीक्षण शिविर गरिएको हो ।बेलवारी–१ स्थित जेष्ठ नागरिक समाजको भवनमा गरिएको शिविरमा १ स... जारी राख्नुहोस...
मधुमेह के हाे र मधुमेहबाट कसरी बच्ने ?
कातिक २७ विराटनगर । आज १४ नभेम्बर अर्थात विश्व मधुमेह दिवस विश्वभर विविध जनचेतना मूलक कार्यक्रम गरेर मनाईन्छ ।मधुमेह रोगका बारेमा जनचेतना जगाउनका निमित्त सन १९९१ नोभेम्बर १४ देखि मधुमेह दिवस मनाउन थालिएको थियो । चिनी रोगलाई सामान्यतय मधुमेह भनिन्छ । मधुमेह रगतमा ग्लुकाेजको मात्रा बढी भएर हुने रोग नै... जारी राख्नुहोस...
के हाे मधुमेह र यसका लक्षणहरू
कार्तिक २८ । रगतमा चिनी (सुगर)को मात्रा धेरै हुनुलाई मधुमेह अर्थात् डाइबिटिज भनिन्छ। ग्रन्थीमा हुने कोषहरू उत्पादन गर्ने प्याञ्क्रियाजले ‘इन्सुलिन’ भन्ने पदार्थ कम उत्पादन गरे वा उत्पादित इन्सुलिनले काम नगरे शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्छ। यसकारण रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ।बिहान खाली पेटमा रगत जाँच्दा च... जारी राख्नुहोस...
कलेजाे सुरक्षा गर्न कफीको महत्वपूर्ण भूमिका
कार्तिक २७ । दिनदिनै कफी पिउदा स्वास्थ्यका लागि लाभदायी छ भन्ने विषय धेरै मानिसलाई थाहा होला । शारिरिक स्फूर्तिका लागि सेवन गरिने कफीले कलोजो सुरक्षामा महत्पूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ ।विभिन्न अध्ययनहरूबाट दिनहुँ कफीको सेवनले कलेजोको सुरक्षा गर्न निकै महत्पूर्ण भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।... जारी राख्नुहोस...
डा. केसीले स्थगित गरे अनशन
कार्तिक २६, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आफ्नो जारी १७ औं अनशन स्थगित गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले देशको सीमा विवादको मुद्दा चलेका कारण उक्त मुद्दा सुल्झाउन साथ दिनका लागि अनशन स्थगित गरेको जानकारी गराएका हुन् । भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको ल... जारी राख्नुहोस...
‘म माफिया होईन, डा. केसीलाई अनशन बस्न लगाउनेहरु माफिया हुन्’ दुर्गा प्रसाई
कात्तिक २६, काठमाडाैं । विर्तामोड स्थित बि.एण्ड.सि मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले अनशनरत डा. गोविन्द केसीले अघि सारेका अहिलेका मागहरु कुनैपनि जायज नभएको जिकिर गरेका छन् । यसअघि केसीले अघि सारेका सबै माग पूरा भैसकेको उनको दाबी छ । रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै प्रसाईले डा. केसीका कारण आफु अन्यायमा... जारी राख्नुहोस...
योग गर्दा हुन्छ यती धेरै फाइदा
कार्तिक २५ । रोग लाग्नै नदिन के गर्नु पर्ला ? सही खानपान, आराम तथा सन्तुलित र स्वस्थ जीवनशैलीले हामीलाई चुस्त राख्ने गर्दछ । हिजोआज सबै उमेर समूह तथा वर्गका मानिसहरुले स्वस्थ रहन विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरेका छन् ।हुन त रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु श्रेयष्कर हो । त्यसका लागि योग सबैको... जारी राख्नुहोस...
डा. केसीको अनशन नछाड्ने अडानः समर्थकका कारण भयो डडेल्धुरा अस्पतालमा तनावग्रस्त
कार्तिक २५, डडेल्धुरा । डडेल्धुरामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन् झन् गम्भिर हुँदै गई रहेको अवस्थामा प्रहरीको दबावका कारण त्यहाँको स्थिती तनावग्रस्त भएको छ । गएको ६ दिन देखी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डडेल्धुरामा अनशन बसेका डा. केसीलाई अनशनस्थल छोडी उपचारको लागि अन्यन्त्र लै... जारी राख्नुहोस...
यी खाने कुरा बच्चालाई खुवाए चाँडाे शारिरिक र मानसिक विकास हुने
कार्तिक २५, काठमाडौँ । सामान्यतया बच्चाको मानसिक विकास ५ वर्षको उमेरसम्म हुन्छ । त्यसक्रममा बच्चाको शारिरिक र मानसिक विकास स्वास्थ्य र पौष्टिक आहारमा निर्भर रहन्छ । किनभने यो अवस्थामा बच्चाको खानामा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याटी एसिडयुक्त खानेकुरा आवश्यक पर्दछ ।त्यतिमात्र होइन् , बच्चाको शारिरिक र... जारी राख्नुहोस...
सौन्दर्य कायम राख्न अनुहारको मेकअप सही तरिकाले यसरी हटाउनुस्
कार्तिक २४ । भनिन्छ, महिलाको सुन्दरता उसको अनुहारमा लुकेको हुन्छ । अनुहारलाई सुन्दर देखाउनकै लागि महिलाहरु लामो समय मेकअपमा खर्चिने गर्छन् । तर, मेकअप गर्दा जति सावधानी अपनाउँछन्, हटाउँदा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । जबकि, अनुहारमा चमक ल्याउन तथा सुन्दरता बढाउन मेकअप जति आवश्यक हुन्छ, त्यसलाई कायम रा... जारी राख्नुहोस...